OnePlus wuxuu ku darayaa lacag-bixinta wireless-ka ah 2019 | Androidsis
OnePlus wuxuu ku shaqeeyaa lacag bixinta wirelesska loogu talagalay moodooyinka 2019
Eder Ferreño | | Batariga, OnePlus
OnePlus waxay soo bandhigtay dayrta nidaamkeeda cusub ee lacag deg deg ah, mid ka mid ah kuwa ugu awooda badan ee aan ka helno Android maanta. Waxaa la filayaa in moodooyinka ay soo saaraan nooca Shiinaha ee 2019 ay adeegsan doonaan. Intaa waxaa sii dheer, tan iyo markii la shaaciyey in shirkadda sidoo kale wuxuu ku shaqeeyaa nidaamkiisa lacag bixinta wireless-ka ah, oo ay ku dari doonaan taleefannadooda ku soo dhacay suuqa sanadkan.
Waxaan hadda aragnaa sida lacag la'aanta lacag-la'aanta ah ay uga dhex muuqanayso noocyada ku jira Android. Moodooyin badan ayaa horeyba u lahaa taageero, gaar ahaan dhamaadka-sare. Sidaas, layaab malahan in nooc sida OnePlus oo kale ah sidoo kale ku dari doona taleefannadooda.
Labada OPPO iyo OnePlus waxay ku biireen Dalladda Awood Bixinta (Wireless Power Consortium) (WPC). Waa urur ka mid ah shirkadaha doonaya inay horumariyaan oo ay dhiirrigeliyaan nidaamka lacag-la'aanta Qi wireless. Sidaa darteed, xaqiiqda ah in labada magac ay isku xirnaayeen, labaduba waxay ka tirsan yihiin hal koox ganacsi, waa daliil cad.
Sidaa darteed, waxaan filan karnaa in moodooyinka uu OnePlus ka bilaabi doono dukaamada sannadka 2019 ay taageero u yeelan doonaan lacag-bixinta wireless-ka. Mabda 'ahaan waan awoodnaa filo labo taleefan oo laga helo nooca Shiinaha. Laakiin sidoo kale waxaa la sheegay inay bilaabayaan nooc cusub, oo wata magac kale. Ma garanayno inay calaamaddan sidoo kale taageero yeelan doonto.
OnePlus 6T mar hore ayuu yimid isagoo leh muraayad gadaal ah, taas oo ah shuruud lagama maarmaan u ah in la awoodo isticmaalka wireless wireless. Marka waa in lafilayaa in moodooyinka sanadkan ay mar kale yeelan doonaan naqshad ka sameysan maaddadan. In kasta oo isticmaalka muraayadaha uu aad ugu badan yahay heerka sare ee hadda ku jira Android.
Shaki la'aan, waxay ballanqaadaysaa inay sanad muhiim u tahay astaanta Shiinaha. OnePlus ayaa la filayaa sidoo kale soo bandhig qaab leh 5G. Waxa kale oo suurtogal ah inay tahay mid ka mid ah taleefannada shirkadda inay ku yimaadaan lacag-bixinadan wireless-ka ah. Qalabka ugu horreeya ee shirkadda ka socda 2019 waa inuu yimaadaa guga. Waxaan hubaal ogaan doonaa waxbadan bilahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » OnePlus wuxuu ku shaqeeyaa lacag bixinta wirelesska loogu talagalay moodooyinka 2019
Samsung waxay sii wadaa inay lumiso dhulkeeda Shiinaha iyo Hindiya
Sida loo rakibo beta ColorOS 6 beta Oppo R15: cusboonaysiinta ayaa timid